Page 1 of 3	1. ကျန်းမာရေး	(Category)
Created on 2. ရခိုင်ကော်မရှင် အစီရင်ခံစာ EU ထောက်ခံ	(2017)
... ရှေးမဆွကတည်းက တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ နိုင်ငံမဲ့အဖြစ် ခွဲခြားဆက်ဆံခံရ မှုတွေ ပပျောက်ရေး၊ ဒေသခံအားလုံး ပညာရေးနဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အရေး တန်းတူညီမျှ ရရှိရေးနဲ့ လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့် ...	Created on 19 March 2017	3. ကျူးဘားရဲ့ အခမဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးစနစ်	(2017)
အမေရိကန်စကားပြောမှာ သုံးနှုန်းပြောနေကြတဲ့ စကားလုံးတွေကို မကြေးမုံက ပြောပြနေတာမို့ အခုတခေါက်မှာတော့ ကျူးဘားနို်င်ငံရဲ့ အခမဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပညာရေးစနစ်အကြောင်း လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။Authors: ဗီအိုအေ... အမေရိကန်စကားပြောမှာ ...	Created on 18 March 2017	4. မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ကျန်းမာရေးအာမခံ	(2017)
ပြည်ပမှာရောက်ရှိနေကြတဲ့ မြန်မာဆရာဝန်တွေအနေနဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် တတ်အားသရွေ့ ကူညီအားဖြည့်ပေးနေကြတာ တွေ့နေရပါတယ်။ သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ Central Queensland ပြည်နယ်၊ Rockhampton ...	Created on 11 March 2017	5. Kim Jong Nam ရုပ်အလောင်း မလေးရှား ကျန်းမာရေးဌာနကို လွှဲပြောင်းမည်	(2017)
မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ကွာလာလမ်ပူလေဆိပ်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့လက အသတ်ခံရသူ ဟာ မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် Kim Jong Un ရဲ့ အဖေတူ အမေကွဲအကို Kim Jong Nam ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး ဘယ်လို ဆန်းစစ်သိရှိသလဲ ဆိုတာကိုပြောဖို့ မလေးရှားရဲချုပ်က ...	Created on 10 March 2017	6. ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဥပဒေသစ်	(2017)
အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း Barack Obama လက်ထဲမှာ စတင်ပြဌာန်းခဲ့တဲ့ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုဥပဒေကို အစားထိုးမယ့် ဥပဒေသစ်ကို အတိုက်အခံ ဒီမိုကရက်တွေသာမက၊ ဥပဒေကြမ်းကို အဆိုပြုနေတဲ့ ရီပတ်ဘလစ်ကန် ပါတီတွင်းမှာပါ ကန့်ကွက်နေပါတယ်။ ...	Created on 09 March 2017	7. ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဥပဒေသစ်	(2017)
အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း Barack Obama လက်ထဲမှာ စတင်ပြဌာန်းခဲ့တဲ့ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုဥပဒေကို အစားထိုးမယ့် ဥပဒေသစ်ကို အတိုက်အခံ ဒီမိုကရက်တွေသာမက၊ ဥပဒေကြမ်းကို အဆိုပြုနေတဲ့ ရီပတ်ဘလစ်ကန် ပါတီတွင်းမှာပါ ကန့်ကွက်နေပါတယ်။ ...	Created on 09 March 2017	8. ထိပ်ပြောင်မှုနဲ့ အရပ်ပုမှုကြား ဆက်စပ်မှု သုတေသနသစ်တွေ့ရှိ	(2017)
အသက်အရွယ် ကြီးရင့်လာတာနဲ့အမျှ အမျိုးသားတွေဟာ မလွဲမရှောင်သာပဲ ထိပ်ပြောင်ကြလေ့ ရှိတာမှာ ကျန်းမာရေး အခြေအနေကြောင့် အပြင် အရပ်ပုတဲ့ အတွက်ကြောင့် အမျိုးသားတွေဟာ အချိန်စောပြီး ထိပ်ပြောင်နိုင်တယ်လို့ နိုင်ငံတကာ ...	Created on 09 March 2017	9. ကန်ကျန်းမာရေးပြုစုစောင့်ရှောက်မှုစနစ်သစ် လွှတ်တော်မှာတင်သွင်း	(2017)
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ ကျန်းမာရေးပြုစုစောင့်ရှောက်မှုစနစ်ကို ရီပတ်ဘလစ်ကန်ပါတီက ပြောင်းလဲပစ်မယ့် အစီအစဉ်ဟာ သိပ်ကို ကောင်းမွန်တဲ့အကြောင်း သမ္မတ Donald Trump က ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။FG_AUTHORS: ဗီအိုအေ... အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ ...	Created on 08 March 2017	10. မေယု FM	(2017)
... အလားတူပဲ ဒီကျန်းမာရေး ကိစ္စရပ်တွေဆိုလည်း လုပ်နေတာရှိ တာပေါ့။ အဲ့ဒါထက်အရေးကြီးတာက အခုဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေပေါ် မူတည်ပြီးတော့ တရား ဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးတွေ လုပ်နေတာလေးတွေရှိတယ်။ ...	Created on 04 February 2017	11. မလေးရှား ရိက္ခာတင်သင်္ဘော ရန်ကုန်သို့ စတင်ထွက်ခွာလာ	(2017)
... ၂၂၀၀ ကျော်၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၂၃၀၊ ဆရာဝန် အယောက် ၂၀ ၊ ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁၀ ဦး ပါဝင်ပြီး ရက် ၂၀ ကြာ ထွက်ခွာလာတာလို့ ဆိုပါတယ်။ သင်္ဘောဟာ ဖေဖော်ဝ... မြန်မာနိုင်ငံက ရိုဟင်ဂျာ မွတ်ဆလင်တွေကို ကူညီဖို့ဆိုပြီး မလေးရှား ...	Created on 03 February 2017	12. သကြားနဲ့ ကျန်းမာရေး	(2017)
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၊ ၂၀၁၇။ ။ သကြားကို လိုအပ်တာထက် ပိုစားမိရင် ဘယ်လို ကျန်းမာရေး ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်စေပြီး၊ ခန္ဓာကိုယ်က လိုအပ်တဲ့ သကြားပမာဏက ဘယ်လောက် ရှိပါလဲ။FG_AUTHORS: ဗီအိုအေ... ဖေဖော်ဝါရီ ၂၊ ၂၀၁၇။ ။ သကြားကို ...	Created on 03 February 2017	13. ကချင်ဒုက္ခသည်များ နေထိုင်ရေးအခက်အခဲကြီးမားလာ	(2017)
တရုတ်နိုင်ငံက လက်မခံဘဲ မောင်းနှင်ထုတ်ခံရတဲ့ ကချင်စစ်ရှောင်ဒုက္ခသည် ၂ဝဝဝလောက်ဟာ အခုအခါမှာ မဂါယန်အနီးက စခန်းတခုမှာ ခိုလှုံနေကြပြီး ရာသီဥတုပြင်းထန်တာကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက် စိုးရိမ်ရသလို စားနပ်ရိက္ခာလည်း ...	Created on 02 February 2017	14. ပိုးသတ်ဆေးနဲ့ ကျန်းမာရေး အန္တရာယ်	(2017)
ဇန်နဝါရီ ၂၆၊ ၂၀၁၇ - မတော်တဆ ပိုးသတ်ဆေးတွေကို ထိကိုင်မိပါက ဘယ်လိုမျိုး လူ့အသက်အန္တရာယ်ကို ထိခိုက်နိုင်ပြီး၊ ရေရှည် ဒုက္ခပေးနိုင်ပါလဲ။ အန္တရာယ်ဖြစ်ခဲ့ရင် ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေပြပြီး ဘယ်လို ကာကွယ်၊ ကုသနိုင်ပါလဲ။Authors: ...	Created on 26 January 2017	15. ဝန်ကြီးချုပ်တွေကို အလုပ်လုပ် ခိုင်းဖို့ ပြော	(2017)
... ခိုင်းပိုင်ခွင့် ရှိတယ်ဆိုတာကို သေသေချာချာမှတ်ထားပါ" ပြည်သူတွေအနေနဲ့ အစိုးရအပေါ် သည်းခံသင့်တဲ့နေရာမှာသည်းခံပြီး သည်းမခံသင့်တဲ့နေရာမှာ မခံကြဖို့ ပြောပါတယ်။ ခရီးစဉ်မှာ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး၊ ...	Created on 25 January 2017	16. သမ္မတဟောင်း Bush Sr. ဆေးရုံမှာ ကုသမှုခံယူ	(2017)
အသက် ၉၂ အရွယ် သမ္မတဟောင်း Bush ဟာ အဆုတ်အအေးမိဝေဒနာကို ခံစားရတာကနေ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းမှာ ကျန်းမာရေးပြဿနာကြုံပြီး၊ အခုနောက်ဆုံး ကုသမှုမှာ မေ့ဆေးသုံးခဲ့ရတယ်လို့လည်း မိသားစု ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်က ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။FG_AUTHORS: ...	Created on 19 January 2017	17. မြန်မာရဲတပ်ဖွဲ့ စွမ်းရည်မြင့်တင်ရေး အင်ဒို အကူအညီပေးလို	(2017)
မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ လူသားချင်းစာနာမှုနဲ့ အကူအညီပေးတာတွေကို သာမက ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ တခြားဦးစား ပေးကဏ္ဍတွေမှာလည်း ကူညီသွားဖို့ ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက ဒီကနေ့ပြောပါတယ်။FG_AUTHORS: ...	Created on 18 January 2017	18. CES 2017 ပြပွဲက ထူးခြားဆန်းသစ်တီထွင်မှုများ	(2016)
ကိုယ့်နောက် တကောက်ကောက်လိုက်ပြီး ဓါတ်ပုံ Video ရိုက်ပေးနိုင်တဲ့ မိုးပျံကင်မရာ။ ဆံပင်သားကျန်းမာရေးကို ပြောပြနိုင်တဲ့ ခေါင်းဖြီး။ လေဟုန်စီးနေရသလို အတွေ့အကြုံရစေမယ့် VR ယာဉ် စသဖြင့် 2017 CES ပြပွဲကြီးမှာ ...	Created on 09 January 2017	19. ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဆက်ထားဖို့ အိုဘားမား လွှတ်တော်ကို တိုက်တွန်း	(2016)
တာဝန်က အနားယူတော့မယ့် အစိုးရအကြီးအကဲနဲ့ နောက်တက်မယ့်အစိုးရမှာ အဓိကတာဝန်ယူမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာ သူတို့ရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် ရပ်တည်ချက်တွေအတွက် ထောက်ခံမှုရဖို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကို အပြိုင်အဆိုင် စည်းရုံးခဲ့ကြတာ ...	Created on 05 January 2017	20. Obama ကျန်းမာရေးအစီအစဉ် ဆက်ထား မထား လွှတ်တော်ဆွေးနွေးမည်	(2016)
အမေရိကန်သမ္မတ ဘရာ့ခ် အိုဘားမားဟာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာ သူ့ရဲ့ သမိုင်းဝင်ဥပဒေကို ခုခံကာကွယ်ရေး ဒီမို ကရက်တစ်လွှတ်တော်အမတ်တွေကို စုစည်းဖို့အတွက် ဒီကနေ့ ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်မှာ သွားဆွေးနွေးဖို့ရှိပါတယ်။Authors: ...	Created on 04 January 2017	StartPrev123NextEnd